အိမ်သုံးပစ္စည်းများ - digital မီးဖို Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ classified: အသစ် Digital မီးဖို
ဒယ်အိုးလား? စတီးအိုးလား?ဖန်အိုးလား? ဘာလာလာတင်သုံးလို့ရမယ့် Digital မီးဖိုလေးလဲရောက်ပီနော်😍😘 Price - 18000 ks Pot & Pan ဆိုတဲ့ အိုးအမျိုးမျိုးကို ချက်ပြုတ်အသုံးပြုနိုင်သလို (အိုးမရွေး) အသားတွေ ဘာတွေ ကင်တဲ့နေရာမှာလဲ အစိုကင်ရော .. အခြောက်ကင်ရော နှစ်မျိုးလုံး ကင်လို့ရနိုင်တဲ့ BBQ Tray တွေတင်သုံးနိုင်တာကြောင့် အခုလို အချိန်အိမ်မှာမိသားစုတွေအတွက် တစ်ရက်တစ်ရက်ချက်ပြုတ်နေရသူတွေ အသဲစွဲပေါ့လေ😊 အိုးမရွေးပဲ ဟင်းများကို လွယ်လင့်တကူ ချက်နိုင်ပြုတ်နိုင်ပြီး အကင်များကို ပြုလုပ်စားသောက်နိုင်တဲ့ မီးဖိုလေးပါနော်။ အပူဒဏ်ခံနိုင်သည့် AB Level Black Crystal ဒီဇိုင်း ပါဝင်ပြီး အလေးချိန်အားဖြင့်5KG လောက်ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်နော်။ Control / Digital ခလုတ်ပါရှိပြီး အပူချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည့် Timer ပါဝင်ပါတယ် မီးအား 2500 W နှင့် 220V/50Hz ပါရှိပါတယ် .. အရွယ်အစားမှာ လှပတဲ့design ဖြစ်တာကြောင့် မီးဖိုချောင်အတွင်းထားရင်လှပသေသပ်နေမှာအမှန်ပါနော်။ Black Ceramic မျက်နှာပြင် Ceramic Cooker အိုးမရွေး၊သာမာန် မီးဖိုလို ရေကျ၊ဆီကျလို့ ဓါတ်မလိုက်၊Auto Cut-off System ပါလို့ သုံးနေတုန်းမီးပျက်သွားလဲ ပိတ်စရာမလိုတော့ မီးခဏခဏလာလဲ မီးဖိုမီးမပိတ်မိလို့ မီးလောင်မှာလဲ စိတ်မပူရပါ။ 140~260 Volts အတွင်းသုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်နော်။ အကင်၊ကြော်လှော်၊ချက်ပြုတ်၊ပေါင်း စိတ်ကြိုက်မီးအပူနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။ မီးဖိုမျက်နှာပြင်က ဟင်းချက်တဲ့ မျက်နှာပြင် နေရာလေးပဲ ပူပြီး ကျန်တဲ့နေရာမပူတော့ ပုံမှန်hotplateလို ထိမိလိုပူမှာ၊ဓါတ်လိုက်မှာမပူရတဲ့အပြင် ထမင်းစားပွဲဝိုင်းပေါ်တင်ပြီး Hotpot ချက်စားလို့လဲရပါတယ်ရှင်။🤗🙂😍😘 09779975467 ကို ဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်။။